Sandblasting မီဒီယာစျေးကွက်အရွယ်အစား 2023 အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 441,9 သန်းရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည် - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Bosun ပွန်းစားခြင်း
သံမဏိ Cutwire Shot
Black ကဖျူး Alumina
Sandblasting မီဒီယာစျေးကွက်အရွယ်အစား 2023 အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 441,9 သန်းရောက်ရှိရန်မျှော်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်
Sandblasting မီဒီယာစျေးကွက်အရွယ်အစား 2023. ဂလိုဘယ် sandblasting မီဒီယာဈေးကွက်အရွယ်အစား 2016 ကနေ 6.5% CAGR မှာကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်, အသံအတိုးအကျယ်စည်းကမ်းချက်များ၌ရုံအောက်မှာ 6% CAGR မှာကြီးထွားဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်အရွယ်အစား 2023. အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 96 သန်းခန့်ကျော်လွန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန် sandblasting မီဒီယာ
စက်ရုပ်ပေါက်ကွဲမှုစနစ်များကို ပို. ပို. အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စံချိန်စံညွှန်းမီအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်များကလောက်ကြသည်မဟုတ်ရှိရာဒေသများရှိသတင်းမီဒီယာဈေးကွက်အရွယ်အစား sandblasting ၏အတိုင်းအတာကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မွေးစားနေကြသည်။ အာကာသ, မော်တော်ကား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အပါအဝင်စက်မှုလုပ်ငန်းပစ္စည်းဖယ်ရှားရေး, စိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေး, မှိုသန့်ရှင်းရေး, မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု, အပေါ်ယံပိုင်းဖယ်ရှားရေးနှင့်ရိုက်ချက် peening အပါအဝင်အများအပြား applications များအဘို့ဤပစ္စည်းကရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းပါစေ။
optional features တွေထုံးစံဒေတာစုဆောင်းခြင်း, အစီရင်ခံစာမျိုးဆက်, အော်တိုပြန်လည်နာလန်ထူဝယ်လိုအားမောင်းထုတ်ရန်ဖွယ်ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သော servo ထိန်းချုပ်ထား rotary နေရာချ, အလိုအလျောက်မီဒီယာစီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်ရေး, အော်တိုပေါက်ကွဲမှုဖိအားကိုထိန်းချုပ်, rotary လှံစွမ်းရည်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အမေရိကန် sandblasting မီဒီယာဈေးကွက်အရွယ်အစား 2023. အားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 96 သန်းခန့်ကျော်လွန်ဖို့ခန့်မှန်းနေသည်
, Sandblasting မီဒီယာဈေးကွက် applications များဖြတ်ဖို့ပွန်းစားခြင်း၏အသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည် roughen ချောမွေ့, သန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်အရောင်မျက်နှာပြင်များ, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြင်အတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ပုံစံမျိုးစုံပြုပြင်မွမ်းမံရန်ပစ္စည်းဖယ်ရှားပစ်ရန်။ ထို့အပြင်ဤပွန်းစားခြင်းအမှုန်အစပိုလန်, ဖြတ်တောက်ခြင်း, မျက်နှာပြင်ပြီးနှင့်ကြိတ်အပါအဝင်တော်တော်များများ application များအတွက်အင်္ကျီနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိပုံစံများကိုအသုံးပြုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း, မော်တော်ကား, အာကာသနှင့်စက်မှုအဓိကအဆုံးသုံးရဒေသများဖြစ်ကြသည်။
အစီရင်ခံစာထဲကနေ Key ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပါဝင်သည်:
အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ပွန်းစားခြင်းပေါက်ကွဲမှုစျေးကွက် 2015 ခုနှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝေစုရဲ့ 10% ကျော်အဘို့မှတ်နဲ့ဒါဟာအထူးသဖြင့်မျက်နှာပြင် finish ကိုအပိုကုန်ကျစရိတ်ကိုအပြစ်လွှတ်ကြောင်းလိုအပ်ပါသည်ရသောအထူးပြု application များအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖြစ်ပါတယ် 2023. မှ 2016 ကနေ 7.2% CAGR မှာကြီးထွားဖို့ခန့်မှန်းထားသည်။
သံမဏိရိုက်ချက်နှင့် grit ကြိတ်စကေး၏ဖယ်ရှားရေးများအတွက်ပေါက်ကွဲမှုသန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍတွင်ကျယ်ပြန့်ပါသည်ရှိနေသော်ငြားလည်း 2016 ကနေ 2023 မှသိသာထင်ရှားသောစက်မှုလုပ်ငန်းဝေစုရဖို့ရန်မျှော်လင့်ထားသည့်နှင့်သံမဏိမျက်နှာပြင်များအနေဖြင့်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်သံချေးနေကြသည်။
ဤသည်ဝယ်လိုအား 2015 ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးမှုကြီးစိုး silica sandblasting မီဒီယာစျေးကွက်ဝေစုအဓိကအားပစ္စည်းကအခြားရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုကြောင့် key ကိုဥရောပနိုင်ငံများတွင်မြင်ကြသူတို့အားအလားတူစည်းမျဉ်းများမရှိခြင်းအဖြစ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအမှတ်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုတွေ့ရှိရာအာရှပစိဖိတ်မှအစပြု။
မီဒီယာဈေးကွက်ဝေစု sandblasting အာရှပစိဖိတ် 2015 သိသိသာသာရှည်ခံကုန်စည်ကဏ္ဍတွင် 45% ကျော်ခဲ့ကြီးထွားလာအခြေခံအဆောက်အအုံအသုံးစရိတ်ဒေသတွင်းအဆင်သင့်ပါပဲ။
Post ကိုအချိန်: သြဂုတ်-15-2016
ROOM တွင် 2517, အဘယ်သူမျှမ 16, Huayuan လမ်း, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-56309596
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-21-56303465
E-mail ကို: info@chinabosun.com
ဖက်စ်: + 86-21-56309596
မီဒီယာစျေးကွက်အရွယ်အစား Sandblasting မျှော်လင့်ထားသည် ...
2016-08-15 Sandblasting မီဒီယာစျေးကွက်အရွယ်အစား 2023. ဂလိုဘယ် sandblasting မီဒီယာဈေးကွက်အရွယ်အစား 2016 ကနေ 6.5% CAGR မှာကြီးထွားဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်, အသံအတိုးအကျယ်စည်းကမ်းချက်များ၌ရုံအောက်မှာမှာကြီးထွားဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ...